Mudane ka tirsan baarlamaanka Somaliland oo sheegay in uu ka badbaaday isku-day dil. – Radio Daljir
Mudane ka tirsan baarlamaanka Somaliland oo sheegay in uu ka badbaaday isku-day dil.
Nofeembar 8, 2009 12:00 b 0
Hargeysa, Nov 08 – Maxamed Faarax Qabile oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland ayaa sheegay in uu ka badbaaday isku-day dil oo la doonayey in isaga lagu khaarajiyo.
Md. Qabile ayaa sheegay in isaga iyo 2 nin oo kale oo isaga weheliyey kuna sugnaa guri ku yaal Hargeysa ay ka badbaadeen tacshiirad lala beegsaday xilli habeen.
Rasaasta ayaa la sheegay in aanay gaysan wax khasaare ah.
Isku-dayga dil ayaa la sheegay in uu salka ku hayo shir jaraa’id oo uu Md. Qabile ku qabtay Hargeysa, kuna baaqay in baaritaan lagu sameeyo qarax ka dhacay Laascaanood oo uu ku dhintay taliyihii ciidanka Somaliland ee gobolka Sool.
Md. Qabile ayaa ku eedeeyey taliyaha ciidanka CID-da ee gobolka Saaxil in uu ka dambeeyey isku-dayga dil, horena uu ugu hanjabay in uu toogan doono.
Dhegasayn ayaa la sheegay in uu hadda xiran yahay, walow aan weli maxkamada la soo taagin.
Bilayska magaalada Hargeysa ayaa baarintaan ku wada iksu-dayga dil ee mudanaha ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland.
Dhacdada ayaa la sheegay in ay salka ku hayso muran hore u dhex maray xildhibaan Qadbile iyo Dhegasayn, taliyaha ciidanka CID-da.
Bilayska ayaan wax faahfaahin ah ka bixin dhacdadan, sheegayse in weli baaritaanku weli u socdo.
Qalibe ayaa u waramay idaacada Horyaal ee magaalada Hargeysa.
Kulan ku saabsan qaadida xayiraada dhoofka xoolaha ee Sucuudiga oo lagu qabtay wasaarada X/Xoolaha.